ဝက်သားတုတ်ထိုး……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀က်သားတုတ်ထိုး………..
Posted by hmee on Jan 10, 2012 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes | 28 comments
<div class="mceTehttp://myanmargazette.net/wp-admin/media-upload.php?post_id=92479&type=image&TB_iframe=1 mp”>
၀က်သားပြုတ်အိုး အခုမနက်ကမှ ရိုက်ထားတာ။
၀က်သားပြုတ်အိုး။ ညက ကျက်ကျက်ခြင်း ရိုက်လိုက်တာ နည်းနည်းမှောင်နေတယ်။
ကြာဇံနဲ့ ၀က်သားသုတ်တာ၊ မီးမဖွင့်မိလို့ နဲနဲမှောင်သွားတယ်။
သဂျီးတခါကမေးဖူးတယ် ဂျုးတွေရော အာရပ်တွေပါ ၀က်သားမစားလို့ ၀က်သားဆိုင် မရှိဘူးလားတဲ့။ ၀က်သားဝယ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းသက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ၀က်သားဒုတ်ထိုး တင်လိုက်ပြီ။ အမှန်တော့ ၀က်သားဒုတ်ထိုး စားချင်တိုင်း အပြင်က၀ယ်မစားချင်တဲ့ အိမ်ကြီးရှင်အတွက် သူစားချင်တယ်ဆိုတိုင်း ချက်ကျွေးနေကြမို့ ပြန်ခါနီးလေး ချက်ကျွေးပါဦး ပြောလို့ ချက်ကျွေးတာ။ ဒီမှာ ၀က်သားဆိုင်ရှိပါတယ်။ ရုရှတွေ ရောင်းတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကလီဇာတော့ ၀ယ်ရခက်တယ်။ သိပ်ရောင်းလေ့ ရောင်းထမရှိဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ဈေးသွားရင်း ၀က်သားဆိုင်ဘက်ရောက်တော့ ကလီဇာတွေ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ စုံနေတာ တွေ့လို့ အားပါးတရကို ၀ယ်ခဲ့တာ။ ဒါနဲ့ပဲ မနေ့က နေ့လည်ကတည်းက ပြုတ်တာ ဒီမနက်စားဖို့။ မပြန်ခင် ရွာထဲကလူတွေကိုလည်း လွယ်ကူတဲ့နည်းလေး သိစေချင်လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။
၀က်ကလီဇာတွေကို သေချာရေဆေး။ အူတွေဆို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး အထပ်ထပ်ဆေး မဟုတ်ရင် ခါးတတ်တယ်။ ရေဆေးပြီးရင် အားလုံးကို ပဲငံပြာရည် အနောက်၊ ခရုဆီ၊ သကြား၊ ငရုပ်ကောင်း၊ တရုပ်မဆလာ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်တွေနဲ့ နယ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဂျင်းကိုသေချာ ညက်အောင်ထောင်းပြီး ကလီဇာတွေထဲ နှံစပ်အောင်ရောနယ်ပါ။ အသည်းကိုတော့ နယ်ပြီးရင် ပန်းကန်တခုထဲ ခွဲထည့်ထားပါ။ တခါတည်း ရောမပြုတ်ပါဘူး။ သူက ပြုတ်တာကြာရင် မာသွားတတ်လို့ အိုးချခါနီးမှ ထည့်ရမှာပါ။ အားလုံးနယ်ပြီးသားကို အိုးတလုံးထဲထည့် မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ပြုတ်ပါမယ်။ ရေမထည့်ရသေးပါဘူး။ ၀က်သားကထွက်လာတဲ့ရေနဲ့ လုံးရမှာပါ။ လုံးရည်ခန်းသွားမှ ရေအပြည့်ဖြည့် အဖုံးအုပ်ပြီး ပြုတ်ရပါမယ်။ ကြိုက်တတ်ရင် ကြက်ဥကိုပြုတ် အခွံခွာပြီး ၀က်သားအိုးထဲ ပြန်ထည့်ပြုတ်ပါ။ အိုးချခါနီးမှ အသည်းကိုထည့် ၇မိနစ် ၊၈မိနစ်လောက်ဆို အသည်းက ကျက်ပါတယ်။ အိုးထဲမှာ ရေ အနေတော်ကျန်ပြီး ၀က်သားလည်း နူးပြီဆို ချလို့ရပါပြီ။ ၀က်သားက တနာရီကျော်လောက်ဆို ကျက်ပါတယ်။
ကြာဇံကို ရေစိမ်ပြီး ပျော့လာရင် ရေစစ်ထား။ ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့် ဆီပူလာတော့ ဂေါ်ဖီနဲ့ မုန်လာဥနီထည့် ပဲငံပြာရည် အနောက်ထည့်၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့်။ ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီပျော့လာတော့ ကြာဇံထည့်ကြော်။ ကြာဇံ နူးရင် ချလို့ရပါပြီ။
ငရုပ်ဆီ မရှိလို့ ငရုပ်သီးအချို အရှည်တောင့် အမှည့်ကိုပြုတ်ပြီး ဘရန်ဒါနဲ့ မွှေပါတယ်။ ပြီးတော့ ငရုပ်သီးနှစ်ထဲကို မန်ကျည်းမှည့်ရည် နည်းနည်း၊ ငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ထန်းလျှက် နှစ်ခဲထည့် ဖျော်ပါတယ်။ အရသာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေတော်လား မြည်းကြည့် လိုတာထပ်ထည့်ပါ။
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ ၀က်သားတုတ်ထိုးလေးကို ကြာဇံလေးနဲ့ သုတ်စားလိုက်ပါတယ်။
၀က်သားတုတ်ထိုးက အချဉ်ရေလဲ မတွေ့ ပါရား…
သများက အချဉ်ရေရယ်..ငြုပ်သီးစိမ်းရယ်..ကြက်သွန်ဖြူရယ်..မပါရင် ၀က်တား မချားတတ်ဘူး
သရေကျတယ်ဆိုတော့ ဘတူမှ နိုင်ဘူးပေါ့ဂျာ
စောစောစီးစီး (မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့) ဖတ်ပြီး စားချင်စိတ်ကပေါက်နေပြီ
ညနေထိစောင့်ရဦးမယ် ရက်စက်ပါ့ မမမှီရယ်
အိမ်ကြီးရှင်ကိုတော့လုပ်ကျွေးပြီး သများကို သရေကျအောင်လုပ်တယ်
ကုန်ကျစရိတ်ကို ဇိခဏ စိုက်ထားလိုက်..
တဂျီးဆီက တစ်သိန်းထုတ်ရင် ပြန်ဆပ်မှာပါ..ပူနဲ့ နော်..ပူနဲ့ ..
နှစ်သစ်မှာ အကြွေး တင်မခံနိုင်ပါဘူး..နှစ်ဟောင်းက အကြွေးတွေလဲ ဆပ်လေ့ မရှိဘူး
အမီပြန်ခဲ့မယ် မွေးနေ့ပြော ….ဘယ်တော့တုန်း ..
ရုံးက စားရိတ်ထုတ်မပေးတောင် ကနွန်း ရောင်းပီး စားရိတ်လုပ်လာခဲ့မယ် …ဟီး …..
မေတို့ ဖေတို့ ကယ်ကြဘာဦး..ရှလွတ်
ဒုတ်ထိုးနဲ့ ထမင်း ဆီစမ်းလေး မစားရတာ တောင် ကြာပေ့ါ။
ဟိုး ငယ်ငယ်တုန်းက နေလည်စာ လေးတွေ ပြန်အမှတ်သွားပြီ။
ဟေး တွတ်ပီမှာ သွားစားမယ်
မန်းလေးက ရွာသူရွာသားတွေ ဘယ်သူလိုက်မလဲ
အမလေးဟဲ့ ဂလု အဟု
ကဲ…ရွာစားရေ ချစ်တို နဲ့ ဆွဲဘီဗျို့ 
အားပါး ရှလူး ရှလဲ
စားသောက်ပြီး ငရုတ်သီး စပ် တာနဲ့အရသာရှိတာနဲ့ ရောထွေးသွားသံ
၁၉လမ်း ကို တအား သတိရတွားဘီ ..မမမီ ရေ ….ကျေးကျေးနော်.. …
ညနေက ဂီ ၀က်နားရွက်တွေ ၀ယ်လာတယ် ခင်ည …စနေနေ့ သုတ်စားမလို့ …..
အားပေးပါဦးနော ….လာမယ် စနေ ..
မန်းဂေးဇက် ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ မန်းဂေဇက် ဂို ဝင်လာဒါ
ဝက်သားဒုန်ထိုး ဆိုတာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်
ဝက်ကလီဇာအစီမံ ဟုသာ အမည်ပေးသင့်ပါဂျောင်း
လက်ခံဘာဒယ်၊ လက်ခံဘာဒယ်။ ဘကြီးဘု။
စိတ်ချမ်းသာအောင်သာ နေပါ။ ;-)
မှီရေ – ဒီအပါတ် လုပ်စားမယ်။ အူတွေ၊ နားရွက်တွေ တော့ ပါမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကြာဇံလဲ ကြော်စားမယ်။ သင်းခရု နော်။
နောက် Post တွေကိုလဲ မျှော်နေမယ်။ :-)
ကိုအောင်ပု ပြောသလို ပြင်၇မလို ဖြစ်နေပြီး။ လက်မှာနေလို့ လက်မြှောင်ဖြစ်သလိုပေါ့။
ကျွန်မလည်း နားရွက်နဲ့ လျှာပဲ ၀ယ်ရတယ်။ ကျန်တာတွေကို ၁/၂ ကီလိုစီ ၀ယ်တော့ ဆိုင်ရှင်က ဒီကလေးမ သနားပါတယ် ဈေးချိုတဲ့ ကလီဇာတွေပဲ ၀ယ်နေရတယ် ပိုက်ဆံမရှိဘူးထင်လို့ သနားတယ်ထင်ပါတယ် အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးတွေ အလကားပေးလိုက်တယ်။ ဥပတိရုပ်က အဲ့လိုကောင်းတာ။
ရန်ကုန်တရုတ်တန်းနားနေတာဆိုတော့ ကြာကြာတော့ မရှောင်နိုင်ပါဘူး။
ဦးပါလေရာရေ ကျွန်မလည်း မတည့်မှန်း ကိုယ့်ဘာသာ သိရက်နဲ့ စားတာ မူးလိုက်တာ မထနိုင်ဘူး။
ကိုဖရဲရေ တွတ်ပီတော့မလိုက်တော့ဘူး ကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူး ပိုင်ရှင်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော် အချဉ်နဲ့တည့်တာ :-) အဲ့ဒီက အချဉ်စားမိရင် ဗိုက်တန်းနာတာ
၃၂*၇၄ ထောင့်ကဆုိုင်မှာသွားစားမယ် လိုက်မလား
ကျမတော့ ၃၁ လမ်းက ဆိုင်ကို ပိုသဘောကျတယ် နောက်ကျလို့ကတော့ ကုန်ပြီသာမှတ်
အကျွတ်ကြော် အရမ်းကောင်း …. ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာပြီ
စိမ်းလန်းစိုပြည် က ဆိုင် လဲ ကောင်းတယ်။ .. အချဉ် ရေ အလွန်ကောင်း..
မှီရေ- ၀ိတ်ချရေး အစီအစဉ်ကို နောက်ဆုတ်ပြီး မှီရဲ့ သင်တန်းကို လက်တွေ့ဆင်းဖို့ပဲ ဦးစားပေးလိုက်တော့မယ်။
များဝက်တားမချားဘူး။ တော်ပြီ။ ဒီပိုစ့်ကျော်တယ်။
မမှီရေ မနက်စာ အခုထိမစားရသေးတာနဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုဖွင့်တာနဲ့
တိုးနေပါရောလား အလုပ်နားမှာ ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်တော့မရှိဘူး
ရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲသုပ်ကိုပဲ မမှီရဲ့ ပုံလေးကြည့်ပြီး စားတော့မယ် ရှလွတ် ……….
ဟင့် သူများတို့ကို သရည်ကျအောင်လုပ်နေတယ် မမှီကတော့
ရဘူး ဒီပြန်လာရင်တော့ MG ကလူတွေကို ၀က်သားဒုတ်ထိုး လုပ်ကျွေးရမယ်
ပို့စ် တွေ ဖတ်ရတာနဲ့တင် မမှီရဲ့ အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်ကို အထင်ကြီးသွားပြီ
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးလို့ အချိန်ရရင် မမှီလက်ရာနဲ့ ရွာသားတွေကို တပွဲလောက် ဧည့်ခံပေးဘ်ို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေကို ယောင်္ကျားတွေက သဘောကျတယ်တဲ့၊ မမှီ အိမ်ကြီးရှင်က မမှီကို တော်တော်ချစ်မှာပဲနော
ကိုနိုဇိုမီရေ အိမ်ကြီးရှင်က မမှီကို ကြောက်နေပြီ။ အစမ်းထွင်လွန်းလို့။ ပိုက်ပိုက်ကလည်း ကုန်တာကိုး။ အရှေ့တိုင်း အစားအစာချက်နည်း စာအုပ်ကို ၀ယ်ပြီး ဘာသာပြန်လိုက် ချက်လိုက်လုပ်နေတာ။ အင်ဒိုးနီးရှား အစားအစာချက်တော့ ပြောတယ် နောက်ဘယ်တော့မှ မချက်နဲ့တဲ့။
ဒါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟုတ်ဖူးပေါ့ …ဘယ်နိုင်ငံလဲဟင် ရရှားမှာလား ??? အစ်စရေးမှာလားဟင် ????